Turning Aspiration into Action - McKnight Foundation
Qeybta:Aaladda4 min akhris
Himilada oo loo rogo ficil
By Na Eng
Warbixin Cusub ayaa muujineysa sinnaanta ficilka ee aasaaska McKnight
Tan iyo markii ay aasaaseen hay'adda McKnight Foundation hay'addii ugu horreysay kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada (DEI) bayaanka sanadka 2018, gudigayaga iyo shaqaalaheena waxay si adag u adkeeyeen caqiidada aan ubaahanahay inaan ku taageerno hadaladeena ficillada. Himilada waa in loo beddelaa ficil maxaa yeelay bulshooyinkeennu waxay u qalmaan in ka badan ujeeddooyin wanaagsan.
Cusub Sinnaanta Waxqabadka warbixinta dukumiintiyo tusaalooyin ka beddel ah oo aan ku qaadnay Aasaaska si aan ugu janjeero ururro kala duwan, loo dhan yahay, iyo sinnaan u janjeedha tan iyo markii la sii daayay bayaanka DEI. Seddexdii sano ee la soo dhaafay, McKnight wuxuu isbedel ku sameeyay sida aan u adeegsano codkeena dadweynaha, deeqaha aan u sameysano, maalgalino maalgalinta, aan isugu yeerno wada-hawlgalayaasha, iyo la shaqeynta kuwa wax iibiya. Dadaalladeenna DEI waa shaqo socota, in kasta oo shaqadani aysan had iyo jeer raacin waddo siman ama toosan, haddana aasaaska ayaa runtii horumar sameeyay.
Saameynta doorka badan
Maaddaama aasaas gaar loo leeyahay, muddo dheer ayaan aqoonsannay in aan saameyn ku abuuri karno doorar badan oo ay ka mid yihiin - oo aan ku fidinno meel ka sii fog-bixin-bixin Lixdaan aqoonsi-sida lagu cadeeyay bayaanka DEI-waa maal-galiye, uruuriye, hogaamiye fikir, shaqo-bixiye, hay'ad dhaqaale, iyo maal-galiye hay'adeed. Ku Sinnaanta Waxqabadka Warbixintu waxay siisaa tusaalooyin talaabooyin tallaabo ah oo aan ka qaadnay meelahaas.
Himilada waa in loo beddelaa ficil maxaa yeelay bulshooyinkeennu waxay u qalmaan in ka badan ujeeddooyin wanaagsan. –NNA ENG, AGAASIMAHA ISgaarsiinta
Waa kuwan xoogaa muhiim ah:
$32 Milyan oo loogu talagalay Gobolka Minnesota oo loo siman yahay. Iyadoo la adeegsanayo geedi socod loo dhan yahay, McKnight wuxuu qorsheeyey barnaamij gebi ahaanba cusub oo diiradda lagu saaray sidii loo dhisi lahaa Minnesota loo siman yahay oo loo wada dhan yahay. Iyada oo miisaaniyadda deeq-lacageedka sanadlaha ah ee $32 milyan laga bilaabo 2022, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn McKnight. Intaa waxaa dheer, dhammaan barnaamijyada McKnight-ha ahaato wax ka qabashada isbeddelka cimilada, taageeridda farshaxanleyda shaqeeya, horumarinta cilmi-baarista dalagga ee iskaashiga ah, ama maalgelinta cilmi-baarista cusub ee neerfaha-waxaa ka go'an inay ku darto sinnaan ahaan iyada oo loo marayo khadadka deeq-lacageed.
Kooxda hoggaanka sare ee McKnight waxaa ka mid ah (bidix ilaa midig) Elizabeth McGeveran, Na Eng, Tonya Allen, Kara Inae Carlisle, iyo Nichol Higdon.
Hoggaan kaladuwan oo ku baahsan aasaaska. Loo shaqeeye ahaan, hay'addu waxay si aad ah u kordhisay kala duwanaanta hoggaamiyeyaasheeda sare iyo barnaamijyada iyo agaasimayaasha howlaha. Gudigeenu wuxuu u xushay Tonya Allen, oo mudo dheer u tartamaysay sinaanta iyo ka mid noqoshada, inay madaxweyne noqoto dabayaaqadii 2020. Waxay madax ka tahay dhamaan haweenka, inta badan kooxda BIPOC oo leh khibrado nololeed oo kala duwan. Xaqiiqdii, 10 ka mid ah 17 xubnood oo ka tirsan kooxda McKnight (ama 59%) oo haya jagooyin heer agaasime ama ka sarreeya ayaa loo aqoonsaday inay yihiin Madow, Asal ahaan, ama dad midab leh.
Ku Hadalka Caddaaladda. Hogaamiye feker ahaan, McKnight wuxuu kordhiyay adeegsiga codkiisa dadweynaha si uu ugu istaago midnimada bulshadayada, si wada jir ah uga murugoodo ficilada rabshadaha jinsiyadaha, iyo u doodista dimoqraadiyadda ka qaybqaadashada iyo si siman loogu qaybiyo lacagaha federaalka.
Warbixintu waxay siineysaa tusaalooyin fara badan oo ku saabsan maalgashiga saamaynta loo dhan yahay, shirarka ku saabsan mowduucyada sinnaanta, iyo dadaallada ah in fiiro gaar ah loo yeesho go'aamada wax-iibsiga ee aasaaska. Waxaa ku taxan tallaabooyin yar yar iyo sidoo kale su'aalo istiraatiijiyadeed oo Mu'asasaddu wali socoto.
Mid ka mid ah faahfaahinta lagu muujiyey warbixinta sinnaanta ee waxqabadka ayaa ah dadaalkeenna si aan u qaabeyno geeddi-socod deeq-lacageed oo bixiya dabacsanaan isla markaana abuura iskaashi dhab ah oo lala yeesho deeq bixiyeyaasha.
Ku Biirista Wadajir Si Loo Dejiyo Qaabab Cusub oo Sinaan ah
Buugeeda Istaraatiijiyad Degdeg ah, u ololeeyaha iyo abaabulaha adrienne maree brown wuxuu ka hadlayaa waxa ay u baahan tahay si loogu guuleysto dhaqan gelinta isbedelka. Iyadoo la adeegsanayo isbarbardhiga jajabka-qaabab adag oo aan dhammaad lahayn oo la abuuray iyada oo lagu celceliyo hanaan fudud oo soo noqnoqda-waxay ku dhiirrigelisaa u-doodayaasha inay fahmaan in dhaqamada yar-yar, ee is-daba jooga ahi ay saamayn ku yeelanayaan kuwa waaweyn. "Waxa aan ku dhaqano miisaanka yar ayaa jaangoyn u ah nidaamka oo dhan," ayay qortay.
Inkasta oo qaar ka mid ah tallaabooyinka lagu soo qaatay warbixinta ay yihiin kuwo suubban oo curdin ah, xitaa kuwa ugu yar ee falalkan waxay abuuraan tusaalooyin iyo qaabab cusub. Weli waxaa noo dhiman shaqo badan oo badan iyo inaan barto. Waan ognahay in xididada cadaalad daradu ay qoto dheer yihiin oo qaabdhismeed yihiin. Waxaan sii wadi doonnaa barashada, dhageysiga, milicsiga, iyo la hadalka — daahfurnaan — si loo hormariyo sinnaanta gudaha iyo dibedda Aasaaska. Tan ugu muhiimsan, waan sii wadaynaa ficilka.
Maaddaama aasaasyo badani ay sameeyaan ballanqaadyo dadweyne oo ku aaddan sinnaanta jinsiyadda, waxaan rajeyneynaa in dhammaanteen aan ka soo warrameyno waaya-aragnimadeenna si furan ay soo dedejin doonto horumarka isla markaana dhiirigelinayso isla-xisaabtan Wadajir, waxaan isugu geyn karnaa dadaalkeenna si aan u dhaqan-galino isbeddel iyo u dhaqaaqno nidaamyo waaweyn.
Akhriso Warbixinta Waxqabadka Sinnaanta
Mawduuca: Isgaadhsiinta, Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, General
Laba Sano Kadib, Waxaan Eegnaa Xagga Waxa Macquul Ah
Hore u socoshada Kala duwananshiyaha, Sinnaanta, iyo Ku darida
Astaamaha Karyn Sciortino Johnson Abriil 2022
MinnPost | Amir Locke wuxuu ina xasuusinayaa waa inaan ku dadaalno sidii loo heli lahaa bulsho cadaalad ah
Astaamaha Tonya Allen Maarso 2022